Lafee cabe wal'aanuuf Baayoogilaasiin mala ajaa'ibsiisaa ta'usaatu barame - BBC News Afaan Oromoo
Lafee cabe wal'aanuuf Baayoogilaasiin mala ajaa'ibsiisaa ta'usaatu barame
Baayoogilaasiin (burcuqqoon qaama namaan walta'u) lafee bakka bu'u danda'a jedhanii yaaduun gowwummaa fakkaata. Haa ta'u male argannoon biyya Ingilaand tokko, Baayoogilaas gosi burcuqqoo jedhame kun lafee caalaa jabaa ta'u bira darbee dabuu kan danda'uu fi kulkula yookin infeekshinii offirra faccisuu kan danda'u ta'uu isaa ibseera.
Bara 2002, kooleejii London Kingis jedhamu kessatti ogummaa fuula deebisanii wal'aanuu kan qabu Ayaan Toomson nama jedhamuuf bilbilli bilbilama. Bilbilli kunis kan bilbilameef waa'ee dardara balaan konkolaataa hamaa fuula isaa irra gahe ilaalchisee ture.
Akkaataan konkolaatichi itti dargaggeessa kan dhahes ijji isaa akka sirritti hin argine gochuurra darbee, halluu akka adda hin baafannes kan isa taasise ture.
Erga balaan kun nama kana irra gahees, doktooronni waggaa sadii guutuuf meeshaalee lafee bakka bu'anii fi lafee cinaachaa nama sana irra fuudhanii galchuun fuula dargaggessa kanaa deebisanii wal'aanuuf ijasaas iddootti deebisuuf yaalii gurgudda godhaa turan.
Haa ta'u malee yaaliin kun lamaan milkaa'uu dhabuu caalaa, waraansa yookin laalaa jabaa dargaggeessa kanatti fide. Doktoronnis ni ijjibaatani. Namni hojiinsaa xiyyaara suphuu ta'e kunis abdiin hojjiitti deebi'uu isaa duguugamaa dhufe.
Debiin Toomson, wal'aansa baayoogilaasii akka aduunyaatti isa jalqabaa ta'e, kan lafee gilaasiin bakka buusu hojjechuu ture. Innis baayoogilaasii fayyadamuudhaan gabatee ija irra ta'uu fi geenggo ijaa naanna'aa caccabee ture kan ittiin wal'aanamu jechuudha.
Gosa gilaasii (burcuqqoo) baayoogilaasii hin ta'iin kan kanaan dura ture jajjabaa fi quqquuqaa waan ta'eef qaama namaa waliin wal hin simatu ture. Kanaafu baayoogilaasiin maal of keessaa qabaachuu qaba?
'Yeroo baayoogilaasiin qaama keessa galu, keessatti baquudhaan aayoonii(ion) seelonni hojii isaanii akka hojjetan ergaa dabarsu gadi lakkisa. Kunis qaamni namaa baayoogilaasicha akka meeshaa biraatti osoo hin fudhatiin akka waliigalan gochuun miirri gaariin akka namichatti dhagaa'amuu fi lafeen haaraa lalisuu akka danda'u kakaasa.' Jedha Kooleejii Impeeriyaal Loondoonitti, oggeessi baayoogilaasii Juliyaan Joonees.
Toomsoniif hojiin isaa dafee firii argamsiise. Akkuma yaaliin godhameen, battalumatti dhukkubsataan sun ijji isaa halluu adda baafachuu dabalatee yeroma sana argu jalqabe. Wagga 15 booda fayyansaa gutummaa guututti deebi'eef.
Toomsonis baayoogilaasii kana fayyadamuu milkiidhaan itti fufee namoota Dokdokkee fi konkoolaatan balaan irra gahe 100 ol ta'an yeroo gabaabaa keessatti yaaluun fayyisuu danda'e.
Baayoogilaasiin inumaa lafee dhukkubsataa caala hojjeta.
Ayaan Toomson, Ogeessa fayyaa
'Baayoogilaasiin kun lafee ofii irra kan wayyuudha' jechuun Toomson dubbateerra.' Akka adda baafannetti baayoogilaasiin suuta baqee aayonii Soodiyeemii naannoo keessa kaa'ame sana kessatti gad-lakkisuun baakteeriyaa ajjeessuu wajjiin, kulkula faccisuus ni danda'a jedhameera.
Jijjiiramni addaa dhufuusaa
Baayoogilasiin bara 1969 keessa saayintiistii Ameerikaa Laarii Heench jedhamuun jalqaba kalaqame. Heench baayoogilaasii kana kalaquuf kan isa kakaase sababni inni guddaan waraana Vetinaam irratti lafeen isaanii warra hir'ateef waan qaamaa namaa waliin rakko malee wal fudhachuu danda'uun guutuuf jecha ture.
Waggoota kudhan darban keessa, doktoroonni ogummaa baqaqsanii yaaluu qaban baayoogilaasii bifa daakuutiin lafee wal'aanuuf itti fayyadamaa turan.
Goodayyaa suuraa Baayoogilaasii saamunaa ilkaaniitti makuun faayidaarra oolfameera
Bara 2010 jalqabee garuu baayoogilaasiin bifa kireemiin bal'inaan oomishamuun tajaajila wal fakkaataa ilkaan namaaf akka kennuuf saamunaa ilkaanii Seensoodaayin jedhamuu keessatti dabalamuudhaan gaba irra ooluu jalqabe. Kana fayyadamuudhaan yeroo ilkaan keenya ittiin dhiqannu, qabiyyee kaalsiyeem foosfeet jedhamu gad-dhiisa. Kunis ilkaan keessa galuun kan caccabuu jalqabe dhawataan akka marguuf kakaasuudhaan deebi'ee akka fayyu godha.
Haa ta'u malee yeroo ammaatti immoo kalaqni baayoogilaasii kun gara sadarkaa olaanaatti guddachuudhaan seenaa yaala lafee fi buusaa qaama namaa ilaalchisee jijjiramni mul'atee hin beekne akka dhufu taasiseera.
Kalaqamuu Baayoogilaasii diriiru
Baayoogilaasiin diriiru (kan suntuuruu fi diriiruu danda'u) kan muummee oomisha meeshaalee Kooleejii Impeeriyaal keessatti namicha Joones jedhamuun hojjetame kun, isa duraatiin kan wal fakkaataa ta'e garuu akka hin caccabnetti hojjetameedha.
Baayoogilaasiin fooyya'aan kun gafa lafee miilaa cabe keessa galfamu, miila sana utubuu dabalatee ulfina qaamaa dhukkubsataa sana sirriitti baachuun, namni sun dhaabata yookin hirkoo malee adeemu akka danda'u taasisa. Kana jechuunis lafeewwan caban kana walitti qabsiisuuf sibiila ykn mala dabalataa utuu hin barbaadiin jechuudha.
Baayoogilaasiin diriiraan kun wayita achi keessa galee kaasee lafee karaa qajelchuu fi akka dagaaguu kaka'umsa kessatti uumuudhaan lafeen addaan cabee turee dhaawataan wal simatee bakka duriitti akka deebi'u amala taasisu qaba.
Fakkeenyaaf yoo lafeen guddaan deebi'ee akka margu barbaadame, miilla nama sanaa irratti wanti ulfaataan irra kaa'amuu qaba. Kunis wanti keessa galfamee sun ulfina sanaan dhiibamee gara seelii lafee gahuun akka kakaasu taasisa.
Kunis darbee jijjiirama keemikaalaa baayoogilaasii keessatti uumuudhaan gara waan lallaafu, walitti dacha'uu fi diriiru garuu hin cabnetti akka jijjiiramu taasisa. Baayoogilaasiin akkanaa kun yaalii lafeetiif jecha itti yaadame kan hojjetame yeroo ta'u keessattuu lafee fi buusaa qaama ribuu walitti qabsiisuun kan suphuudha.
Joones itti dabaluudhaan akkaataa itti baayoogilaasii haala ammayyaan, piriintara 3D'n bixxilame bakka barbaachisu keessa galchuun ribuuwwaan lama walitti qabuun danda'amu uumuu irratti yaalii godhaa ture. Kanas dhugoomsuuf jilba namoota qaama isaanii akka qorannoof fayyadu wareeganii du'anii fudhachuun akkaataa inni wal simatee hojjetu irratti falaasamaa ture.
'Jilbi qorannoon irratti geggeefamu kunis sochii barbaachisaa jilbii tokko gochuu qabu kan akka tarkaanfachuu fi dadacha'uu danda'uun isaa erga xiinxalamee booda' jedha Joones. 'Dursa beeylada irratti ega yaalamee booda gara kilinikaatti geessuun nama irratti yalamee hojii irra oola' jechuun dubbateera.
Kalaqni baayoogilaasii tajaajila wal fakkaataafis ooluu danda'uu isaa
Baayoogilaasiin kun yeroo dheeraaf laalaa fi rakkina harkee dugdaa yookin diiskii namoota gidirfamanis gargaaru ni danda'a jedhaniiru. Yeroo ammaatti ogeessonni, namootni harkeen dugdaasaani hin hojjenne kan isaan ittiin yaalan, lafee gajjalaa fi gararraa harkee jiran walitti hodhuun ture. Kun immoo yeroodhaaf laalaa (dhuukkuba) nama sanatti dhagaahamu hambisa malee sosocha'anii deemuu irratti garuu rakkoo guddaa akka uumu ni beekama. Baayoogilaasiin haala jedhameen bixxilamee hojjetamu garuu harkee dugdaa hojii ala ta'e sana bakka buusudhaan rakkina kana hambisuu danda'eera.
'Hanga ammaatti namni ribuudhaa fi waanta sochiif gargaaru hojjetee itti milkaa'u danda'e yoo hin jirreyyuu, kalaqa baayoogilaasii kanaan milkoofneerra' jechuun Joones dubbateera.
'Amma waanti nurraa eegamu sirriitti kana hojjechuu danda'u keenya mirkaneessudha kan jedhe Joones, yoo waanti hundumtuu karaa nuu qabatee kalaqni kunis qormaata barbaachisaa keessa darbeef waggoota 10 dhufan keessatti mana yaalaatti hojii irra oola' jedheera.
Hojii harka namaatiin qaama namaa akkas godhanii walitti fayyisuun, bakka buusuun yeroo dheeraaf waan amanamuu hin dandeenye ta'ee haa turu malee, yeroodhaa yerootti guddachuudhaan gara fuulduraatti faayidaarra akka ooluu danda'u amanamaa dhufeera. Amma iyyuu namoonni miliyoona hedduutti lakkawaman ilkaansaanii samuunaa qabiyyee kana ofkeessaa qabuun fayyadamaa akka jiran ifaadha.